Hawaasni ergaawwan sobaa burjaaja’uurraa akka of qusatu hubachiifame – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
On May 23, 2022 129
Finfinnee, Caamsaa 15, 2014 (FBC) – Mootummaan Naannoo Amaaraa hawaasni ergaawwan sobaan burjaaja’uurraa akka of qusatu hubachiise.
Humnoonni Amaaraa salphisuuf hojjetaa jiran yeroo garagaraatti sanadoota sobaa qopheessuun tamsaasa turuun kan eerame yoo ta’u, har’as akkuma kaleessaa mootummaadhaan beekamtii kan argatee fi gootota Ityoophiyaa kan ta’an Faannoon tarkaanfii fudhachuufi kan jedhu ibsa dirqama raawwii opireeshinii maqaa jedhuun sanada sobaa tamsaasuurratti kan argamuudha.
Sanadaa kalaqaa sobaa shororkeessitoota ABUT fi bakka bu’oota isaa kana Mootummaan Naannoo Amaaraa kan hinbeekne yoo ta’u, diinni fuuldurattis sanadoota sobaa qopheessuudhaan tamsaasuu isaa itti fufuun isaa waan hin oolleedha.
Kanaaf, hawaasni jaalattoota nageenyaa naannichaa hundi sanadoota kalaqaa sobaa akkanaarraa of qusachuu akka qabu waamicha dhiyeesseera.
Irra deebiidhan gaaffii ummataa keenyaa kan ta’e gaaffii nageenyaa fi tasgabbii deebisuuf ummata hunda hirmaachisuudhaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfiin fudhtamaa kan jiru yoo ta’u, tarkaanfii kanaan injifannoo cululuqaan galmaa’eera jedheera.